महामारीको कहालिलाग्दो समयमा जनतामाथि यति ठूलो धोका ? | हिमालयन ट्रिबुन
HT २०७८ बैशाख २३, बिहीबार ११:०५
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कमिसन नमिलेकै कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट व्यावसायीहरु विजय दुगड र ऋतु वैद्यले कोरोना भ्याक्सिन रोकेको भन्ने खबरले लज्जित बनाएको बताएका छन् ।
बिहीबार सामाजिक संजालमार्फत कोइरालाले महामारीको कहालिलाग्दो समयमा जनतामाथि यति ठूलो धोका हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका हुन् । उनले देश र जनता कोरोना संक्रमणको महामारीमा रहेको समयमा स्वयं प्रधानमन्त्रीकै छत्रछायाँमा रहेका व्यावसायीहरुले जनस्वास्थ्य माथि गरेको यति ठूलो अपराध र बेइमानी कदापि क्षम्य हुन नसक्ने बताएका छन् ।
कोइरालाले यसको सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने र समय आएपछि जनताले यसको हिसाब गर्ने बताएका छन् । कोइरालाले लेखेका छन्, ‘कमिसन नमिलेकै कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट व्यावसायीहरु बिजय दुगड र ऋतु वैद्यले कोरोना भ्याक्सिन रोकेको भन्ने खबरले लज्जित बनाएको छ। महामारीको कहालिलाग्दो समयमा जनतामाथि यति ठूलो धोका ? पहिलो चरणको महामारीका समयमा ठुलो आर्थिक चलखेल गरी प्रधानमन्त्री निकट ओम्नी समुहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिइएको थियो । देश र जनता कोरोना संक्रमणको महामारीमा रहेको समयमा स्वयं प्रधानमन्त्रीकै छत्रछायाँमा रहेका व्यावसायीहरुले जनस्वास्थ्य माथि गरेको यति ठुलो अपराध र बेइमानी कदापि क्षम्य हुन सक्दैन। यसको सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ र समय आएपछि जनताले यसको हिसाब गर्नेछन्।’
कोभिडविरुद्धको खोप खरिदमा प्रधानमन्त्री निकटका व्यवसायीको कमिसनको चक्करमा रोकिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । तर यसबारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही बताएका छैनन् । यसबारेमा बुधबार नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
Spread the loveकाठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचारका लागि शय्या चाहिएमा टोलफ्रि नम्बर ११३३ एवं मोबाइल नम्बर ९८५१२५५८३७ र ९८५१२५५८३९ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी बिरामीका लागि शय्या चाहिएमा वा अस्पताल जान परेमा ती टोलफ्रि र मोबाइल नम्बरमा सम्र्पक गर्न आग्रह […]
२०७८ जेष्ठ १५, शनिबार ०९:००